အမျိုးသမီးများအတွက် Birthstone Earrings and Gemstone Stud Earrings
ကျောက်မျက်ပုတီး | စစ်မှန်သောအဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာနှင့်အတူလုံးနှင့်နားကပ်
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 129 ရောင်းဈေး € 89
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းနှင့်ချီသောအမျိုးသမီးများသည်ကျောက်မျက်ပုတီးများကိုအကြောင်းပြချက်ကောင်းများဖြင့်နှစ်သက်ကြသည်။ ရောင်စုံကျောက်မျက်ရတနာများ၏ရှုထောင့်တစ်ခုစီမှအလင်းရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့သည် ဦး တည်ရာတစ်ခုစီသို့လှပစွာတောက်ပနေသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာနားကပ်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြော့ရှင်းမှုအဆင့်ကိုပြသပြီးသင့်ကိုစစ်မှန်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်တူစေသည်။ မင်းမူပိုင်ခွင့်ကိုသင်တွေ့ခဲ့ရသော်လည်းနာမည်ကြီးများသည်အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာနားကပ်များကိုဝတ်ဆင်ကြသည်။ သတင်းကောင်းမှာသင်တို့၏တတ်နိုင်သောစုဆောင်းမှုကြောင့်ယခုသူတို့၏ဇိမ်ခံအသွင်အပြင်နှင့်ကိုက်ညီနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လှပသောကျောက်မျက်ရတနာနားကပ်များကို ၀ ယ်ယူရန်သင်အလွန်ချမ်းသာရန်မလိုအပ်သော်လည်းအရည်အသွေးမြင့်လက်မှုပညာ၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု၊ အရောင်အသွေး၊ မာစတာဖြတ်နှင့်ကျောက်မျက်ရတနာနားကပ်များ၏တော်ဝင်ကာရက်တို့မှအကျိုးကျေးဇူးရရှိလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်ထူးခြားသည့်အချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ကျောက်မျက်နားများသည်ပconflictိပက္ခကင်း။ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်ကလေးလုပ်သားများမှကင်းလွတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့မှသာသန့်ရှင်းသောကျောက်မျက်ရတနာအသစ်ကိုဂုဏ်ယူစွာဖြင့်ပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျောက်မျက်ပုတီးကိုလည်းကျောက်မျက်သောပုတီးသို့မဟုတ်ကျောက်နားကပ်ဟုခေါ်ကြသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်အမျိုးသမီးများအတွက်တတ်နိုင်သည့်ကျောက်မျက်ရတနာနားကပ်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တင့်တယ်သောကျောက်မျက်ရတနာနားကြပ်ဒီဇိုင်းစုဆောင်းမှုတွင်ရူဘီပုတီး၊ စစ်မှန်သော Sapphire ပုတီးနှင့်ရီးရဲလ်ပုလဲနားများပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Natural Topaz ပုတီးနှင့် Natural Citrine ပုတီးအပြင်အရည်အသွေးမြင့် Simulated Emerald Earrings များကိုပါဆက်ပေးပါသည်။ ဤရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အရည်အသွေးမြင့်ကျောက်မျက်ရတနာများ၏အရောင်များမှာနက်ရှိုင်းသောအနီရောင်၊ သမုဒ္ဒရာအပြာ၊ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအစိမ်း၊ ကောင်းကင်ပြာပြာ၊ စင်ကြယ်သောအဖြူနှင့်ရွှေဝါရောင်တို့ဖြစ်သည်။ ကျောက်မျက်ပုတီးကဲ့သို့သောအသွင်သဏ္inာန်မျိုးစုံဖြင့်လာသည်။ ဥပမာ - ဘဲဥပုံဖြတ်ကျောက်နား၊ ဘန်ကက်ဖြတ်ကျောက်မျက်များ၊ တောက်ပသောဖြတ်ကျောက်မျက်ပုတီး၊ မင်းသားများသည်ကျောက်မျက်ရတနာနား၊ ဖြတ်၊ သစ်တော်သီးပုံကျောက်မျက်နားနှင့်အခြားအထူးဒီဇိုင်းများကဲ့သို့ကျောက်မျက်လုံးသို့မဟုတ်လုံးပုတီး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောက်မျက်ရတနာနားကြပ်ဒီဇိုင်းများအများစုသည်တော်ဝင်ဒီဇိုင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လှပသောအရည်အသွေးမြင့် Simulated စိန်များရှိပြီးအားလုံးသည်ငွေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ နောက်တဖန်မစောင့်ပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောစုဆောင်းမှုကို ဖြတ်၍ သင်အကောင်းဆုံးရထိုက်သောကြောင့်သင်အကြိုက်ဆုံး gemstone နားကပ်ဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်လည်းကိုက်ညီမှုရှာတွေ့လိမ့်မယ် ကျောက်မျက်ရတနာလက်စွပ် သို့မဟုတ်ကိုက်ညီ ကျောက်မျက်ရတနာ.
description: ဤ ၀ တ်စုံအနီရောင်ပတ္တမြားနားများသည် royalties ကိုပြသပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးသောနားကပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နားကပ်တစ်ခုစီသည် Brilliant ၁.၇၅ ကာရက်ရှိ Oval Cut Red Ruby (စုစုပေါင်း ၃.၅ ကာတာ) နှင့် Diamond Simulants ၃၀ ဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ Fine တွင်သတ်မှတ်သည် 92.5% သန့်ရှင်းသော Sterling ငွေ.
ရီးရဲလ်ကျောက်မျက်ရတနာ: ဒီကျောက်မျက်ရတနာသည်ပတ္တမြားနီဖြစ်သည်။ ပတ္တမြားကိုအလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ် (Al) အပူပေးခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်2O3) နှင့်မြင့်မားသောဖိအားအောက်မှာ 2000 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှခရိုမီယမ်; သဘာဝတွင်သာမကဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ဖြစ်ပျက်နိုင်သောဖြစ်စဉ်တစ်ခု၊ ဒီဓာတ်ခွဲခန်းမှာပတ္တမြားကြီးစိုက်ပျိုးတယ်ဆိုတာ ၁၀၀% ရီးရဲလ်အရည်အသွေးရှိတဲ့ပတ္တမြားဖြစ်တယ်။
ဒီဇိုင်းကောင်း ဒီလှပသောအမျိုးသမီးနားကပ်များကိုကျွမ်းကျင်သောထိပ်တန်းဒီဇိုင်နာများမှဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးကျောက်မျက်ရတနာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုပန်းချီများမှထုထည်လုပ်ထားသည်။ လှပသောအဖြူရောင်ကောင်းသောငွေဖြူ ၉၂၅ ဒေါ်လာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောငွေသည်၎င်း၏တောက်ပမှုနှင့်သန့်ရှင်းမှုကြောင့်ရွေးချယ်ထားသောအဖိုးတန်သတ္တုဖြစ်သည်။
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီ Elegant ပတ္တမြားနားကပ်ကိုရယူရန်။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံစာများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။
description: ဒီလှပသောရီးရဲလ်ပုလဲနားကပ်သည် Ivory White ရှိစစ်မှန်သောရေချိုပုလဲနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ရီးရဲလ်ပုလဲများသည် ၈-၉ မီလီမီတာအရွယ်ရှိပြီးအရည်အသွေးကောင်းသည့်ငွေကြိုးနားကပ်နှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ သူတို့၏တောက်ပမှု၊ ဘဲဥပုံနှင့်ဆင်စွယ်ဖြူအားလုံးသည်သဘာဝကျသည်။ ဤစစ်မှန်သောပုလဲနားကပ်များသည်သင့်အသွင်အပြင်ကိုကြည်လင်ပြတ်သားပြီးinတ္ထိထိစေသည်။
ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်: ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည့်ပုလဲနားကပ်ဆွဲဒီဇိုင်းသည်အရည်အသွေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတို့တွင်ထူးကဲသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူသိများသည့်ရတနာကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် Pure Gems မှပုလဲရတနာစုဆောင်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုတီးစေ့များပါ ၀ င်သည့်အဖြူရောင်သုတ်ထားသောသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဇိမ်ခံလက်ဆောင်သေတ္တာတစ်လုံးတွင်ဖဲကြိုးဖြင့်ထည့်ထားသည်။
ဒီဇိုင်းကောင်း ဒီလှပသောအဖြူရောင်ပုလဲနားကပ်များကိုကျွမ်းကျင်သောထိပ်တန်းဒီဇိုင်နာများမှဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးကျောက်မျက်ရတနာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုပန်းချီကားများမှထုထည်ကြီးမားစွာပြုလုပ်ထားသည်။ လှပသောအဖြူရောင်ကောင်းသောငွေဖြူ ၉၂၅ ဟာအလွန်ကြည်လင်သန့်ရှင်းမှုကြောင့်ရွေးချယ်ထားသောအဖိုးတန်သတ္တုဖြစ်သည်။
အခမဲ့ပို့ပေးသည်: ဤပုလဲများ၊ ပို့ခြင်း၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုအကြောင်းနှင့်ဖောက်သည်များ၏ထောက်ခံချက်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။ ဤအခမဲ့ပုလဲနားကပ်များကိုကမ္ဘာအနှံ့အခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ငွေပြန်အမ်းငွေနှင့်ရက် ၁၀၀ ပြန်အမ်းငွေရရန်ယခုမှာယူပါ။ "Buy Now" ကိုနှိပ်ပါ။
description: ဤစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသော Topaz နားကပ်တွင်ဘရာဇီးမှ ၁.၁ ကာတာမြ Emerald Cut Topaz တွင်အဓိကအကျဆုံးကျောက်မျက်ဖြစ်သည်။ (စုစုပေါင်း ၂.၂ ကာတာ) ။ Sky Blue Topaz ကို ၉၂,1.1% Pure Silver ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Diamond Simulants သုံးခုနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ Trilliant Sapphire တစ်လုံးစီတပ်ဆင်ထားသည်။ မျိုးစုံကျောက်မျက်ရတနာများပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ပုတီးစေ့များကိုသီးသန့်ကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဤအရယူရန် ကြော့ Topaz နားကပ်။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံစာများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။
description: ဤ Fine Sapphire Stud Earrings တွင်အသေးစိတ်ဆွဲထားသောဒီဇိုင်းရှိပြီး ၀.၆ ကာရက်ရှိ Oval Cut Blue Sapphire (စုစုပေါင်း ၁.၂ ကာတာ) နှင့် ၉၂.၅% Fine Silver တွင်စီထားသည့် Diamond Simulants ၁၄ ခုပါ ၀ င်သည်။ သငျသညျperfectlyုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုက်ညီမှုနှင့်အတူသူတို့ကိုပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ် ဘဲဥပုံဖြတ် Sapphire လက်စွပ် နှင့် ဘဲဥပုံဖြတ်နီလာလည်ဆွဲ.
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဤအရယူရန် နီလာနားကပ်။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံစာများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။
description: Cushion Cut Emerald Simulant Stud Earrings တွင်နားတွင် ၁.၉ ကာရက် Emerald Simulant (စုစုပေါင်း ၁.၈ ကာတာ) နှင့် Diamond Simulants ၄၀ Brillant ဖြတ်ထားသည်။ ရုရှားနိုင်ငံမှ၎င်း၏အရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းဖန်တီး Emerald Simulants ကို ၉၂.၅% Pure Silver ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အထူးနှင့်ကိုယ်စားလှယ်ပုတီးများသည်ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်လှပမှုကိုသိမ်မွေ့စွာစွဲမှတ်စေသည်။
description: ဒီလှပသော Ladies ပုလဲနားကပ်သည်ကြီးမားသောစစ်မှန်သောရေချိုပုလဲနှစ်ခုရှိသည်။ Pink Pearl Earrings ၌ ၈-၉ မီလီမီတာအရွယ်ပုလဲအရွယ် ၂ ခုရှိပြီးအရည်အသွေးကောင်းသည့် Silver Hanger Earrings တွင်ရှိသည်။ သူတို့၏တောက်ပမှု၊ ဘဲဥပုံနှင့်ပန်းရောင်အရောင်အားလုံးသည်သဘာဝကျသည်။
ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်: ပုလဲနားကပ်ဆွဲခြင်းသည်ကျောက်မျက်ရတနာအမှတ်တံဆိပ် Pure Gems ၏ကျောက်မျက်ရတနာစုဆောင်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရည်အသွေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတို့တွင်ထူးကဲသည်။ ဤအပိုင်းအစသည်ဖဲကြိုးထားသောအဖြူရောင်ပွတ်သစ်သား၏ဇိမ်ခံလက်ဆောင်သေတ္တာထဲတွင်ထုပ်ထားသည်။
ဒီဇိုင်းကောင်း ဤလှပသောပန်းရောင်ပုလဲနားကပ်များသည်ကျွမ်းကျင်သောထိပ်တန်းဒီဇိုင်နာများမှဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးကျောက်မျက်ရတနာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုပန်းချီများမှထုထည်ကြီးမားစွာပြုလုပ်ထားသည်။ လှပသောအဖြူရောင်ကောင်းသောငွေဖြူ ၉၂၅ ဒေါ်လာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောငွေသည်၎င်း၏တောက်ပမှုနှင့်သန့်ရှင်းမှုကြောင့်ရွေးချယ်ထားသောအဖိုးတန်သတ္တုဖြစ်သည်။
အခမဲ့ပို့ပေးသည်: ဤပုလဲများ၊ ပို့ခြင်း၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုအကြောင်းနှင့်ဖောက်သည်များ၏ထောက်ခံချက်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။ အမှာစာ ဤအအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ Ladies ပုလဲနားကပ် ယခုအခါကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံဖြင့်ရက် ၁၀၀ ပြန်အမ်းငွေရရှိနိုင်ပါပြီ။ "Buy Now" ကိုနှိပ်ပါ။
description: ဒီချစ်စရာပန်းရောင်ပုလဲနားနားမှာပန်းရောင်နှစ်ပွင့်ရှိရေချိုပုလဲနှစ်ခုပါရှိပါတယ်။ ပုလဲလုံးအရွယ်အစားသည် ၈-၉ မီလီမီတာဖြစ်ပြီးအရည်အသွေး Sterling Silver ဖြစ်သည်။ Pearl Stud Earrings တွင်သဘာဝအရအနီးအနားရှိပုံသဏ္,ာန်၊ တောက်ပမှုနှင့်ပန်းရောင်ရှိသည်။
ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်: ပန်းရောင်ပုလဲနားကပ်များသည်ပုလဲရတနာစုဆောင်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးရတနာကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် Pure Gems ၏အရည်အသွေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတို့တွင်ထူးကဲသောကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူသိများသည်။ ဤအပိုင်းအစသည်ဖဲကြိုးထားသောအဖြူရောင်သစ်သားသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဇိမ်ခံလက်ဆောင်သေတ္တာထဲတွင်ထုပ်ထားသည်။
စစ်မှန်သောပုလဲ: ဤစစ်မှန်သောပန်းရောင်ပုလဲများသည်အရည်အသွေးမြင့်ပုလဲများဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်သဘာဝအရောင်၊ တောက်ပ။ ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်ရှိပြီး ၁၀၀% သန့်စင်သည်။ ပုလဲ၏မိခင်သာလျှင် ၄ င်း၏ဗဟိုတွင်အခြားပစ္စည်း (shell bead nucleus) မရှိသောကြောင့်သာပါဝင်သည်။
ဒီဇိုင်းကောင်း လှပသောပန်းရောင်ပုလဲလုံးများကိုအဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်ထိပ်တန်းဒီဇိုင်နာများမှဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးကျောက်မျက်ရတနာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုပန်းချီများမှထုထည်ကြီးမားစွာပြုလုပ်ထားသည်။ လှပသောအဖြူရောင်ကောင်းသောငွေဖြူ ၉၂၅ ဟာအလွန်ကြည်လင်သန့်ရှင်းမှုကြောင့်ရွေးချယ်ထားသောအဖိုးတန်သတ္တုဖြစ်သည်။
အခမဲ့ပို့ပေးသည်: ဤပုလဲများ၊ ပို့ခြင်း၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုအကြောင်းနှင့်ဖောက်သည်ထောက်ခံချက်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။ ယခုပန်းရောင်ပုလဲနားကပ်ကိုလက်ခံရရှိရန်မှာလိုက်ပါ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံဖြင့်ရက် ၁၀၀ ပြန်လာသည့်ကာလ။ "ယခုဝယ်ယူပါ" ကိုနှိပ်ပါ။
description: ဤ Fine Ruby Stud Earrings တွင်နားအပါးတွင် ၀.၆ ကာရက်ရှိ Oval Cut Red Ruby (စုစုပေါင်း ၁.၂ct) ၏အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းတစ်ခုရှိပြီး ၉၂.၅% Fine Silver တွင်စီထားသည့် Diamond Simulants ၁၄ ခုပါ ၀ င်သည်။ သူတို့၏ဘဲဥပုံဖြတ်ပိုင်းများသည်နားကပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကိုက်ညီစေသည် ပတ္တမြားဘဲဥပုံလက်စွပ် နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ္တမြားဘဲဥပုံလည်ဆွဲ.
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဤအရယူရန် ကြော့ပတ္တမြားပုတီး။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံစာများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။
description: ဤကြော့အမျိုးသမီးပုလဲပုတီးနား၌ Light Purple မှစစ်မှန်သောရေချိုပုလဲနှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ဒီဇိုင်နာပုလဲနားကပ်များသည်အရွယ်အစား ၈-၉ မီလီမီတာရှိသောရတနာပုလဲနှစ်လုံးနှင့်အရည်အသွေးကောင်းသော Fine Silver Hanger Earrings တို့ကိုတွဲထားသည်။ သူတို့၏တောက်ပမှု၊ ဘဲဥပုံနှင့်အလင်းရောင်ခရမ်းရောင်အားလုံးသည်သဘာဝကျသည်။
ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်: ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည့်ခရမ်းရောင်ပုလဲနားကပ်များသည်အရည်အသွေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတို့တွင်ထူးချွန်မှုအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူသိများသည့်ရတနာကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် Pure Gems မှပုလဲရတနာစုဆောင်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်; ဤအပိုင်းအစသည်ဖဲကြိုးထားသောအဖြူရောင်ပွတ်သစ်သား၏ဇိမ်ခံလက်ဆောင်သေတ္တာထဲတွင်ထုပ်ထားသည်။
စစ်မှန်သောပုလဲ: ဤစစ်မှန်သောခရမ်းရောင်ပုလဲများသည်ရေချိုအိုင် mussels တွင်မွေးမြူထားသောအရည်အသွေးမြင့်ပုလဲများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်သဘာဝအရောင်၊ တောက်ပမှုနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ရှိသောမျက်နှာပြင်များရှိပြီး ၁၀၀% သန့်စင်သောကြောင့်ပုလဲ၏အမေတွင်သာပစ္စည်း (shell bead nucleus) မရှိသောကြောင့်၎င်းတွင်ဗဟိုတွင်ရှိသည်။
ဒီဇိုင်းကောင်း လှပသောအမျိုးသမီးပုလဲနားကပ်များကိုကျွမ်းကျင်သောထိပ်တန်းဒီဇိုင်နာများကဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးကျောက်မျက်ရတနာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုပန်းချီများမှထုထည်လုပ်ထားသည်။ လှပသောအဖြူရောင်ကောင်းသောငွေရောင် ၉၂၅ ဒေါ်လာနှင့်ငွေတောက်ပသောငွေသည်၎င်း၏တောက်ပမှုနှင့်သန့်ရှင်းမှုကြောင့်ရွေးချယ်ထားသောအဖိုးတန်သတ္တုဖြစ်သည်။
အခမဲ့ပို့ပေးသည်: ဤပုလဲများ၊ ပို့ခြင်း၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုအကြောင်းနှင့်ဖောက်သည်များ၏ထောက်ခံချက်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။ အမှာစာ ဤအအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးသမီးများနေ့ ပုလဲပုတီး ယခုအခါကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံဖြင့်ရက် ၁၀၀ ပြန်အမ်းငွေရရှိနိုင်ပါပြီ။ "Buy Now" ကိုနှိပ်ပါ။
description: ဤ Crystal Clear Emerald Simulant Earrings သည်စုစုပေါင်းကျောက်မျက်အလေးချိန် ၄ ကာရက် (နားကြပ်နှုန်းလျှင် ၂ တန်) ရှိသည်။ ရတနာများသည်ရုရှားမှအရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းမှဖန်တီးထားသောရေစက်ပုံစံ Emerald Simulants ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုချောမွေ့စွာကြည့်ရှုနိုင်စေရန်ချောချောမွေ့မွေ့ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့် ၉၂.၅% Pure Silver Earrings အောက်တွင်ဆွဲထားသည်။